La Havane, Ilay Tanàna iainana Tsara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2016 7:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Magyar, Español
Ankohonana iray ao an-tranony ao La Havane. Sary: Mónica Baró, Periodismo de Barrio (Fanaovangazetin'ilay vohitra).
Avy amin'ity tantara ity, no hanombohan'ny fandraisanay anjara miaraka amin'ny media nomerika kiobàna Periodismo de Barrio. Noho io fiarahamiasa io, manjary afaka mitsidika firenena iray samihafa amin'izay aseho any anaty gazety mahazatra ireo mpamaky ny lahatsoratray.
Ny 7 desambra 2014, nandritra ny fety fankalazana tao Dubai, namaky ireo vokatry ny fifaninanana iraisam-pirenena nokarakaraina mba hisafidiana ireo tanàna fito tsara indrindra, ny Fondation soisa “New7Wonders”. Hita tamin'ireo tsara indrindra izay nisongadina tamin'ireo tanàna 1200 nandray anjara avy taminà firenena 220 i La Havane. Tsy araka izay nandrasan'ny rehetra, sady tsy isalasalàna, nahavita nandresy nanoloana ireo malaza toa an'i Barselona, Londona , Atena, Kyoto, Prague, Meksika, ny renivohitra kiobana nony farany; mba haneho, miaraka amin'ireo enina hafa, “ireo zavabita sy ireo aingam-panahy mikasika ny sivilizasiona an-tanàndehibe erantany”. La Havane, karazana Kioba iray hafa izay mazàna no omena lohateny ratsy hatrany, dia tsotra fotsiny ihany, tanàna iray feno fifanoheran-kevitra goavana.
Ary ny 17 desambra, raha mbola tsy nilatsaka akory ny tazon'ny fanononana ireo News7Wonders, nanambara sahady ny fahalevonan'ireo disadisam-pifandraisana ara-diplomatika nisy teo aminy ireo governemantan'i Kiobà sy Etazonia, mpifahavalo vita fianianana tamin'ny Ady mangatsiaka, Ny Nosy, ilay malaza tsy mety trotraka amin'ny fahaizany mireska ny momba azy, dia tafaverina anatin'ireo “folo voalohany lohalaharan”ny fitaterambaovao. Nahazandana ny maro ny fifanarahana teo amin'ireo filoham-pirenena roa, Raúl Castro sy Barack Obama, narindra tsara tamim-pahamalinana nandritra ny 18 volana tao anaty tsiambaratelo tanteraka. Nitarika tsy fahazoana antoka, fanantenana, fahadisoam-panantenana, hafaliana, fifampiandaniana, faniriana te hahafanta-javatra, arakaraky ny fandikàna izay tiana omena an'ireo kabary. Saingy niteraka indrindra indrindra koa firoboroboana teo amin'ny fizahantany avy amin'ny ranomasina izy amin'io lafiny io: ny tombony ifampizaràna no tiantsika holazaina amin'izany.
Tamin'ny taona 2014, ny Boky firaiketana Antontanisa ao Kiobà nampiseho tao anatin'ny pejy fanampiny mikasika ny fizahantany fa nanomboka ny taona 2009 ka hatramin'ny taona 2014 nitombo maherin'ny antsasaka lavitrisa ny isan'ireo mpizahatany. Tamin'ny taona 2015, nandray olona miisa 3 524 779 ny firenena, izay maneho fitomboana 17,4%. Izany hoe azo tao anatin'ny taona iray monja ny vokatra mitovy azo tao anatin'ny taona dimy talohan'ny 17D. Niteraka tombony afa-karatsaka maherin'ny 3 miliara dolara io fitomboana io, araka ny lahatsoratry ny mpahay toekarena iray, José Luis Rodríguez, izay naka ireo vaovaony avy ao amin'ny Antenimieram-pirenena momba ny Fahefam-bahoaka. Ary tabataba no niantombohan'ny taona 2016. Ny famoahan'ny Ofisy Nasionaly momba ny Antontanisa sy ny Torohay (ONEI) dia nampatsiahy fa ny volana janoary monja dia efa nahazo mpitsidika miisa 417 764, izay efa ho 47 000 mahery noho ny tamin'ny taona 2015 tamin'io volana io ihany. Tsy atao mahagaga raha neken'ny gazety ofisialy ny fizahantany ho toy ny “sehatra iray tena mavitrika amin'ny toekarena“.
Lamaody izao i Kiobà ary La Havane no vokatra lohalaharana arosony eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Io no tanànan'ny firenena mahasarika mpitsidika be indrindra. Tsy ho any morontsiraka ao aminy mihitsy no andehanana any, na ny natiorany ihany koa. Mbola misy tsaratsara kokoa any an-kafa. Tsy hoe noho izy renivohitra ihany koa. Tsia. Ho any noho io antony mitovy io izay hanaovana azy ho mpanome aingam-panahy amin'ireo hira, mitety ireo vanimpotoana sy ireo sokajy rehetra. Izy no ilay andriambavin'i Los Zafiros, Joaquín Sabina, Fito Páez, Carlos Varela, Gerardo Alfonso, Habana Abierta, Los Van Van, Manolito Simonet. Mahalana izy no odian-tsy raharahiana. Na izy ankahalaina lalina, na izy tiavina. Na izy roa miaraka. Manana toetra masina ity tanàna ity. Amin'ny ankapobeny izy toa miseho ho saro-takarina, miovaova, tsy azo vinaniana, mpila ady.
Kanefa, tsy rariny ny hanome ny laza rehetran'ilay boom ho an'ny 17D, ny 17 desambra, anaram-bositra nomena ny fanarenana ny fifandraisana misy eo amin'i Amerika sy Kiobà.
La Havane, tanàna malaza
Talohan'ny fanambaràna nataon'ireo mpifahavalo vita fianianana taloha, ary na dia talohan'ny fanambaràn'ny Fondation soisa aza, Beyoncé Knowles, ilay vehivavy mpihira, sy Jay-Z, mpiangaly gadona Rap, fanta-daza noho ireo fahombiazany mamokatra mozika malaza, dia tonga tany La Havane tao anatin'ny fandaharanasa iray ho fifanakalozana fanabeazana. Tamin'ny volana aprily 2013 izany, fony i Kiobà mbola hita tao anaty lisitra narafitry ny Departemantam-panjakan'i Etazonia, nahitàna ireo firenena izay manohana ara-bola ny asa fampihorohoana. Ny hoe olona ambony ireo mpitsidika azy, Amerikana indrindra indrindra, dia manamarika betsaka ny vazivazy fanoherana mirefarefa amin'ny tany fa tsy fironana irian'ny tsena sy ireo politikan'ny governemanta.
Saingy izy roa, tsy mivadika amin'ny zotra nofinidiny amin'ny fanaovana fampisehoana, dia nanao izay hahazoana antoka ny hahitàna azy ireo. Nitsangatsangana teny amin'ireo ivontoerana manan-tantara izy ireo. Namela ny hakàna sary azy. Nisakafo tany amin'ireo toeram-pisakafoanana tsy miankina. Nitsidika ireo ivontoeram-panabeazana sy ireo orinasan-javakanto. Naka sary izy tenany (selfies) niaraka tamin'ireo mpankafy azy mihintsy aza moa i Beyoncé, nandihy ny guaguancó izy ary niakatra sehatra niaraka tamin'i Juana Bacallao, ilay mpanakanto malazan'ny toeram-pandihizana ‘cabaret’ kiobàna. Nijanona nitàna ny toerana henjana nahafantarana azy sy tia helingelenina i Jay-Z , kanefa, rehefa tafaverina tany Etazonia, novaliany an-kira tamin'ny alalan'ny karazana taratasy misokatra (“Open Letter”) momba ny traikefa kiobàna azony ireo kiana nataon'ireo mpikambana repoblikana ao amin'ny Kongresy : “Aty Kioba aho, tiako ireo Kiobana. Tena manjavozavo io teny kaominista io, kanefa ilay mikrô nampiasaiko aza dia avy any Shina”.
Azo lazaina araka izany fa io no iray tamin'ireo toe-javatra nitranga izay nandray anjara tamin'ny nahalasa an'i Kiobà ho toerana lamaody ara-pizahantany ho an'ireo olo-malaza izay atao Lohateny amin'ny pejy voalohany any anatin'ireo gazety. Nipaka hatrany amin'ny Maison Blanche ny Star System. Tsy maintsy ekena kosa aloha fa ny fitsidihan'i Barack Obama, niaraka tamin'ny vadiny tsy misy tomika, Michelle sy ireo zanany vavy Sasha sy Malia, tamin'ny volana martsa 2016, dia tsy mena-mitaha amin'ny an'i Beyoncé sy Jay-Z. Na ihany koa ilay ilay vao haingana nataon'ilay mpihira Rihanna, izay nandrehitra ireo araben'i La Havane ho toy ny vehivavy mampiteny ny moana, miaraka amin'ny volony toy ny afo sy ireo fitafiny tena mirehidrehitra, raha ilay mpakasary, Annie Leibovitz, kosa maka sary azy ho tahiry tsy ho faty ho amin'ny gazety Vanity Fair.
Fa ny tsy iadiana hevitra ho nanentana ny tanàna tao anatin'ireo volana vitsivitsy izay, dia ireo fampisehoana maimaimpoana nataon'i Olga Tañón, DJ Diplo sy Major Lazer, ary ry Rolling Stones. Vitan'ny zavakanto sy ny heriny tsy manam-paharoa amin'ny fanetsehana ny olona ny nanome rariny ireo fiovàna eo amin'ny fifandraisana ara-politika.
Fampisehoana antaon-dry Rolling Stones tao La Havane (Sary: Mónica Baró – Periodismo de Barrio)
Manoloana ireo sary rehetra, ireo pikantsary ary ireo lohateny goavana rehetra ireo, adino matetika fa ity tanànan'ny fifanoherana ity dia sady tsy fametapetahana mahasondriana an'ireo dokambarotra fanentanana, na koa faran'ny tontolo iray izay sary maro no manaporofo azy. Tanàna izay iainana tsara io. Fonenana mampiantrano fianakaviana maro ireny tranobe rehetra naratra vokatry ny adiny nifanaovany tamin'ny fotoana ireny, mihoatra noho ny fanoharana amin'ny fikororosiana fahana.
La Havane no faritany kely indrindra ao Kiobà sady be mponina indrindra. Eo amin'ireo velarantany 728 km² dia misy mponina 2 121 871, araka ireo antontanisa tamin'ny taona 2014 – tsy misy ireo mpifindra-monina. Ary ireo mponina ireo, ara-dalàna sy “tsy ara-dalàna”, ireo no mandrafitra azy.
“Ny tanàna, ireo olona izay mitoetra ao no manao azy, ary indrindra indrindra, faritana avy amin'ny alalan'ireo fiarahamiasa misy eo amin'ireo izay monina amin'ny faritry ny tanàndehibe, izay, fantantsika io, dia ireo rafitra sosialy” hoy ny fanamarihan'ireo mpikaroka izay nandray anjara amin'ny fanoratana ny boky Toutes les Havanes. Tetika mba hahatakarana ireo fahavitrihany ara-tsosialy, navoaka tamin'ny taona 2014. Eo amin'ny tandrifiny, Mario Coyula, mpanao maritrano, nibata ny loka lehibe mikasika ny taotrano, manipika ao anaty famintinana ilay boky fa “ilay tanàna dia vokatry ny zava-misy ara-kolontsaina manan-danja sy tena ilaina izay manambatra ny dikany ara-tantara sy fotodrafitrasa amin'ny fahafahana mampihatra azy amin'ny andavanandro any amin'ireo sehatra ara-tsosialy rehetra”.
Amin'ny volana Novambra 2019, hanamarika ny faha-500 taona nisiany ilay renivohitra. Araka izany, izay ho ankalazaina dia hampahatsiahy betsaka indrindra ny làlana nodiavin'ny tanàna tanatin'ireo taona maro lasa. Azo ankalazaina ny fametrahana indray ireo foibe ara-tantara ; ny fampihenana ireo tahan'ny fandotoana ny ranony mba hahitàna ireo trondro, ireo vorompotsy ‘pélicans’ ary ireo ‘mouettes’ ao amin'ny helodranon'i La Havane ; ny fitomboan'ny trano fandraisam-bahiny miaraka amin'ireo hotely vaovao vao naorina noho ny fanampian'ireo mpamatsy vola avy any ivelany ; ireo fitsidihan'ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ny resaka finonana, ny filoham-pirenen'i Etazonia ary ireo olo-malaza tsy tambo ho isaina; na koa, ilay hazon'ny fromazy matanjaky ny Tempoly (Tempoly Kely) izay vao avy natsatoka fotoana vitsy monja talohan'ny nitsidihan'i Obama, mba hanoloana ilay tranainy, efa ho faty, izay namabo ny tontolo manodidina azy. Saingy izay tokony hankalazaina aloha indrindra dia ny fomba famerenana amin'ny laoniny ireo rafitra fanomezana trano fonenana sosialy. Raha tsy izany, sarintsariny fotsiny izay rehetra fanomezam-boninahitra eo. Na dia vita aza nony farany ireo asa famerenana ny Capitole, ilay ho toeram-piasàn'ny Parlemanta Kiobàna, ary na dia tratra aza ny mpizahatany 10 tapitrisa isan-taona, isa mampieboebo .
*Ampahany manokana novokarin'ny GlobalVoices ity lahatsoratra ity. Azonao jerena eto ny dikany voalohany ary vakiana eto ireo lahatsoratra hafa an‘i Mónica Baró “